ခမ်းနားတဲ့ အလှတရားကြောင့် မြန်မာမင်းသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မျက်နှာပွင့်ခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် – Myanmar News Groups
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှဆုံးနဲ့ ဖက်ရှင်အကျဆုံး မင်းသမီးချောလေးတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမရဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်ရော၊ အနုပညာပိုင်းမှာ ထူးချွန်တာကြောင့်ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်က ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြင်သူတစ်ကာ ငေးမောရလောက်တဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ အလှဆုံး ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ သူမပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်လိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကြည့်လေ ပိုပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလေဖြစ်တဲ့ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ အရမ်းကို လှရက်လွန်းနေတာပါနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်တောင် မဝနိုင်လောက်အောင် လှရက်လွန်းတဲ့ ရွှေကစ်လေးရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ “Elegant is my kinda makeup I was born with. ကစ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေထဲမှာ အဖြူရောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိလားဗျို့။ မဆိုးဘူးနော်၊ ဒီကောင်မလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းသား !!!” ဆိုပြီး ဒီကောင်မလေး ချစ်ဖို့ကောင်းသားနော်ဆိုပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အခမ်းနားဆုံးနဲ့ အလှဆုံး ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပါ။
ခြေလှမ်းလေး တစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကို ကြွေကျစေသူကြီးပါနော်မြန်မာမင်းသမီးလေးက ဒီလောက်ထိ လှရက်လွန်းလို့ ဂုဏ်ယူနေရပါတယ် ကစ်ရေ
ဝတ်မှုံရွှေရည်ကတော့ လတ်တလောမှာ ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးဖြစ်နေပြီး တစ်ခြားသော အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ဖြစ်နေတာပါ။ ရွှေကစ်လေးကတော့ တလောကလည်း ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင် ရိုက်ကူးတဲ့ “တိမ်တွေပေါ်ကပန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ချင်းပြည်နယ်မှာ သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း မြင်လိုက်တာနဲ့ ထင်းနေတဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်လေးကိုချစ်ရင် share သွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Previous Article “ဝတုတ်လူဆိုး”ရဲ့ “ဦးဏ”ကိုခေါ်ပြီး Romantic ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
Next Article မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ မီးလောင်ခံရတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်ကို ငွေ(၅)သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး